Sidee looga hortagayaa INE inay la socoto dhaq dhaqaaqyadeenna | Wararka IPhone
Dhowr toddobaad ka hor ayaa lagu dhawaaqay in Machadka Qaranka ee Tirakoobka (INE) uu sameyn doono daraasad si loo arko sida isbaanishku u dhaqaaqo, daraasad in wejigeeda koowaad bilaabaneyso maanta kuna egtahay 21-ka Nofeembar. Sida uu sheegay jirkani, xogta la ururiyey waxay noqon doontaa mid gebi ahaanba aan la aqoonsan doonin.
Si loo fuliyo daraasaddan, waxay heshiis la gashay saddexda shirkadood ee waaweyn ee Isbaanishka ah: Movistar, Vodafone iyo Orange, yaa diri doona jagooyinka lambarrada taleefannada laakiin ma diri doono kuwa haya khadadka. Sababta: in la ogaado waa kuwan dhaqdhaqaaqyada caadeystay ee dadweynaha. Waxay kuxirantahay hawlwadeenkeena, waan iska ilaalin karnaa in lagu raad joogo.
Sababta loo doonayo in la ogaado taas oo ah barakicinta caadiga ah ee dadweynaha Isbaanishka, ayaa ah in la ogaado kaabayaasha ay tahay in fiiro gaar ah la siiyo iyo halka ay tahay in laga bixiyo tiro badan oo adeegyada bulshada ah. Waxaan ku noolnahay waqti marka asturnaanta ay shuruud uga dhigtay adeegsadayaal badan, adeegsadayaasha bilaabay ka digtoonow dhaqdhaqaaq kasta oo saameyn ku yeelan kara noloshaada gaarka ah, gaar ahaan hadday wax walba ka dambeeyaan dowlad ayaa jirta.
Wejiga koowaad ee daraasaddan, oo aan ku jirno, waxaa la qabtaa inta u dhexeysa 18-ka illaa 21-ka Nofeembar waxaana laga fulinayaa aagagga celcelis ahaan ay deggan yihiin 15.000, marka maahan inaad ku nooshahay magaalo ka go'doonsan adduunka, waxaad noqon doontaa qayb ka mid ah daraasadda haddii aadan iska ilaalin ama haddii aad macmiil u tahay Movistar, waa hawl wade aan na siinin ikhtiyaarka ah inaanan ka mid ahayn daraasaddan.
1 Maxay yihiin shirkadaha ka tirsan daraasaddan?
2 Sida looga hortago in booskaaga lagu raad joogo
3 Sideen ku hubnaa in xogta aan la aqoonsanayn?
4 Maalmahee kale ayaa la ogaan doonaa goobta aan ku suganahay?
Maxay yihiin shirkadaha ka tirsan daraasaddan?
Saddexda hawl wade ee qayb ka ah daraasaddan ayaa kala ah: Movistar, Vodafone / Lowi iyo Orange. Haddii taleefankaaga uusan ka mid ahayn kuwan, waad ku kalsoonaan kartaa inaadan ka mid noqon doonin daraasaddan. Hawlwadeenka kaliya ee aan noo oggolaanaynin inaan kaa hor istaagno inaad u gudbiso xogtayada INE waa Movistar, sameysashada saaxiibo sida caadiga.
Sida looga hortago in booskaaga lagu raad joogo
Haddii aad tahay macaamiil Movistar ah, xalka keliya ee aanad u joojin isticmaalka taleefankaaga muddada afarta maalmood ah ee wejiga koowaad ee daraasaddan socon doonto waa Ha u isticmaalin isku xirka xogta aaladda 4G. Waxaad isticmaali kartaa isku-xirka Wi-Fi ee qalabkaaga adiga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Hab kale oo looga hortago inay raadraacaan sida aad u dhaqaaqdo inta lagu jiro maalmaha soo socda waa in lagu dhejiyo taleefanka casriga qaabka diyaaradda ka hor intaadan dhaqaaqin oo aad dib u dhaqaajinin markaad gaarto meesha aad u socoto ama marka aad runtii u baahan tahay inaad isticmaasho taleefanka.
Haddii aad tahay macaamil Vodafone / Lowi, waad awoodaa ka fogow kaqeybgalka daraasaddan Iyada oo loo marayo codsiyada kala duwan ee labada hawlwadeenba noo diyaariyaan.
Iyada oo loo marayo dalabka My Vodafone. Waxaan galnaa Akoonkeyga> Oggolaanshaha iyo dookhyada> Oggolaanshaha> waxaanna shidnay tabka "Ma aqbalayo in Vodafone ay bixiso xog aan la aqoonsan ..."
Lowi, oo ka tirsan Vodafone, ayaa sidoo kale noo ogolaanaya inaan ka hortagno xogta goobta aan ku wareejineyno daraasaddan iyada oo loo marayo codsigeeda My Lowi. In sidaa la yeelo, waa inaan ka soo galnaa arjiga My Lowi> Dejinta> Ogeysiisyada> Oggolaanshaha iyo Xulashada oo aan calaamadee sanduuqa "Ma aqbalayo in Lowi uu bixiyo xog qarsoodi ah ...".
Nidaamka looga hortagayo ragga ka socda Orange inay diraan macluumaadka goobta aan joogno inta lagu jiro maalmaha soo socda iyo wejiyada xiga ee barnaamijkan way fududahay maaddaama ay nagu qasbeyso inaan dirno emayl anagoo wata aqoonsikeena orangeproteccion.datos@orange.com. Waxaan sidoo kale ka fogaan karnaa tan adoo warqad u diraya xarunta Orange Spain ee Madrid Paseo Club Deportivo 1, Parque Empresarial, La Finca Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Sideen ku hubnaa in xogta aan la aqoonsanayn?
Aragtida shirqoolku waxay nagu qasbeysaa inaan aaminno dhammaan dhaqdhaqaaqyada noocan ah ee saameeya asturnaantayada, illaa iyo inta ay muhiim noo tahay (waa inay ahaato) Movistar, oo ah shirkadda kaliya ee aan noo oggoleyn inaan ka hortagno in la is-wareejiyo xogta goobta aan ku sugan nahay, ayaa sheegaysa dhammaan macluumaadka la xiriira macluumaadka shakhsiyeed waxaa lagu beddelay aqoonsiyo gaar ah oo aan dib looga laaban karinSi kale haddii loo dhigo, ma jirto qaab loo sameeyo geedi socodka dib u noqoshada si loo awoodo in la ogaado lambarka taleefanka meesha ay ku taal ee la siiyay INE ay u dhigantaa, markaa suurtagal maaha in la ogaado cidda ay xogtu u dhigantaa.
Machadka Qaranka ee Tirakoobka, waxay xaqiijinayaan in sida tirakoobka oo dhan ay soo saarto, ay dammaanad ka tahay sirta tirakoobka iyo u hoggaansamayaa dhammaan shuruudaha Sharciga Ilaalinta Macluumaadka.
Maalmahee kale ayaa la ogaan doonaa goobta aan ku suganahay?
Wejiga koowaad ee daraasadda ayaa bilaabmaya maanta oo ay taariikhdu tahay 18-ka Noofambar kuna eg 21-ka Nofeembar. Noofambar 24, Diisambar 25, Luulyo 20 iyo Ogast 15 waxay noqon doontaa maalmaha soo socda ee xogta goobtayadu ku taal. Kaliya waa inaan fulinno habka looga hortagayo in xogteenu ka mid noqoto daraasaddan markii ugu horreysay, markaa haddii aad sameyso inta lagu jiro wejigan koowaad, mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sidee looga hortagayaa INE inay dabagal ku sameyso dhaqdhaqaaqyadeena
Iibinta taleefannada IPhone waxay ku koraan Shiinaha iyagoo adeegsanaya noocaan cusub